ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေမည့်ဗီဒီယို။ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေမည့်ဗီဒီယို
မော်နီကာဆန် | | ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
ပုံ - Sealegacy.org
အဆိုပါဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံရှည်လျားမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာနေထိုင်ခဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာစက်မှုတော်လှန်ရေးနဲ့အတူမထင်ခဲ့ဘူး၊ နောက်ဆုံးတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏သင်္ကေတဖြစ်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရာသီဥတုမှာအပြောင်းအလဲတွေရှိလာပြီးအသစ်တွေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်လူဝေးလွန်းသွားပြီ။ သူအနိုင်ရချင်တဲ့ဆန္ဒကသူ့မှာအရာအားလုံးရှိမှသာပျော်ရွှင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်စေခဲ့သည်။ သူသည်နတ်ဘုရားတစ်ပါးကဲ့သို့ပြုမူခြင်းအားဖြင့်သူသည်မျိုးစိတ်များစွာ၏အသက်ကိုလက်နက်ဖြင့်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့၏နေရင်းဒေသများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများကိုပါသွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်းသိမ်းယူခဲ့သည်။ အဆိုပါဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံမျိုးသုဉ်းသွားကြဖို့လာမယ့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Sea Legacy အဖွဲ့သည်တည်ထောင်သူများဖြစ်သော Paul Nicklen နှင့် Cristina Miterrmeier တို့နှင့်အတူ Baffin ကျွန်းရှိစွန့်ပစ်ထားသည့် Inuit စခန်းတွင်ကနေဒါတွင်အကြီးဆုံးနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမနေရာတွင်မြင်သာသောမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသော်လည်းအန္တရာယ်နည်းပါးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ polar ဝက်ဝံသည်သူ၏မျက်မှောက်တွင်သေဆုံးနေသည်။ အကြောင်းပြချက်?
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသူတို့အပြစ်မတင်သော်လည်းယင်းတို့ကိုသူတို့သိသည် မြင့်မားသောအပူချိန်ကြောင့်တူညီသောအခြေအနေများတွင်ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများသည်ပိုမိုများပြားလာသည်။ အချိန်တိုင်းတွင်မှေးမှိန်နေသောဖြစ်စဉ်သည်ထိုတိရိစ္ဆာန်များကိုအစာရှာရန်ဝေးလံသောဒေသများသို့ခရီးသွားစေခဲ့သည်။
ဝံပိုမသေစေဖို့သင်တားနိုင်မလား။ ဒါပေါ့. သစ်တောများကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းမပြုခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ သို့သော်မေးနိုင်သောမေးခွန်းမှာအောက်ပါဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ရန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပါသလား။
လူသားများသည်သဘာဝကိုအလွန်ရက်စက်သော်လည်းအလွန်ကောင်းသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လူ ဦး ရေစုဝေးလျှင်၊ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပြendနာကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေမည့်ဗီဒီယို